ClearVoice: Usoro Ọdịdị Arụ Ọrụ Ọdịnaya Maka Atụmatụ, iringnye ego, Ijikwa, na mbipụta | Martech Zone
ClearVoice: Usoro Ọdịnaya Arụ Ọrụ Maka Atụmatụ, iringgba Ulo, Ijikwa, na mbipụta
A na-enwekarị njedebe abụọ na ụlọ ọrụ Martech, igwe ojii na-emetụta ya, na nyiwe na-anọ naanị ya. Mana ụfọdụ ọmarịcha ọganihu ndị m na - ahụ bụ nyiwe nke ga - enyere gị aka ahịa agile usoro ma belata mkpa maka ịnyefe data ma ọ bụ njikọta ọnụ.
Ochicho maka ihe di elu iji wulite ikike, nweta ikike na engines ọchụchọ, ma na-akwalite ịkekọrịta na mgbasa ozi mgbasa ozi, na-arịwanye elu. Ihe ndị ahịa na-achọ bụ na-amụba ebe akụrụngwa dị larịị ma ọ bụ belata. Na ndị na-ere ahịa anaghị echekwa n'enweghị ezigbo ngwaọrụ.
ClearVoice: Nrụ ọrụ dị mfe karị. Ndị nweere onwe ka mma. Nnukwu nloghachi.
Nkọcha emepụtawo ihe ngwọta maka ndị na-ere ahịa ọdịnaya na-anọpụ iche. Site na atụmatụ usoro ọdịnaya gị ịchọta na igo talent dee na dezie na atụmatụ, ka ijikwa na atụmatụ kalenda ọdịnaya gị, na ọbụlagodi ebipụta ọdịnaya gị site na ijikọ usoro njikwa ọdịnaya - ClearVoice ka ị kpuchie.
ClearVoice na-enye ndị ahịa ikike ịkwado, iku ego, jikwaa na kesaa ọdịnaya dị n'etiti site na ikpo okwu ha.
Atụmatụ na echiche
Chọọ site na ebe nchekwa data kachasị akụrụngwa gbasara akụkọ na akụkọ. Nyochaa arụmọrụ ọdịnaya, kpado echiche, mepụta echiche na mee ngwangwa gị kalenda isiokwu.
Chọta, gbazite ma kwụ ụgwọ ndị na-akwụ ụgwọ ọdịnaya
Chekwaa oge ma hapụ sọftụwia ahịa ọdịnaya ClearVoice dakọtara gị na nke zuru oke ndị edemede na ndị okike efu. Naanị ịnye nkọwa gbasara ọrụ na teknụzụ anyị na-enye profaịlụ onye edemede ịhọrọ site na. Freelancers na-amasị gị ma wuo otu zuru oke.
Njikwa Mgbasa Ozi Ọdịnaya na Ọdụ
Jikwaa ọdịnaya gị, ìgwè ndị dị n'ime na nke mpụga, na mkpọsa na ngwaọrụ mmezi. Soro usoro ntuziaka, ahazi, na ịkwụ ụgwọ freelancer na-akpaghị aka.
Nkesa ọdịnaya na mbipụta
Push ọdịnaya ozugbo na WordPress, HubSpot na ọtụtụ usoro nchịkwa ọdịnaya ndị ọzọ site na API anyị nwere ike ịnweta. Jikọọ na ClearVoice Ngwọta ịkesa ọdịnaya gị site na mgbasa ozi akwụgoro ụgwọ ya.
Rịọ ClearVoice Demo
Tags: agileahịa agileikukummepe ọdịnayammepụta ọdịnayachọta ndị dere ọdịnayafreelancersokpokoroWordPressOru oma
Ndi Nzukọ Gị Dị Njikere Iji Jiri Nnukwu data?